बुधबार, साउन १३, २०७८ ०२:११:१७ युनिकोड
धादिङ,२९ भाद्र ।
आयुर्वेद एउटा प्राचीन चिकित्सा प्रणाली हो । अरू औषधी प्रणालीहरूको विपरीत, आयुर्वेदले रोगहरूको उपचार गर्नु भन्दा स्वस्थ जीवन शैलीमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्दछ । आयुर्वेद के हो ? यसबाट कसरी उपचार गर्न सकिन्छ ? आयुर्वेदको महत्व तथा उपचार लगाएतका विषयमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङका प्रमुख डा.सुईरा जोशीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
कोरोना भाईरस(कोभिड–१९) को कारणले गर्दा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको महत्व बढेको हो ?
तपाइले भन्नुभएको ठिक हो । हामीले सधैँ भान्सामा प्रयोग गरिरहेको जडिबुटिले पहिले देखिनै हामीलाई स्वास्थ्य रहनको लागी र रोगसँग लड्ने क्षमता बढाइरहेको थियो । त्यसैले त्यो सधैँ पाउने चिज भएकाले त्यति महत्वको साथ कसैले हेरीरहनु भएको थिएन ।
जब कोरोना भाईरस आयो र जताततै समाचारमा पनि आयुर्वेदिक औषधिले राम्रा गरेको भनेर सुन्न थालेपछि अझैबढि रुचि देखाउन थाल्नु भएको हो । हामिले पनि महशुस गरेका छौँ । नेपाल भरि जति पनि आयुर्वेद केन्द्रहरु छन् सबै तिर त्यस्को बारेमा जानकारी लिनको लागि आउने मान्छेहरुको भिड बढेको हामीले पनि सुनेका छौँ ।
वास्तवमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको विषयमा नागरिकहरुलाई जानकारी कम छ, यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ र कार्यालयबाट कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ ?
धादिङबेशीमा २०५८ सालमा जिल्ला आयुर्वेद स्थापना भएको हो । त्यो बेला देखि निरन्तर सेवा दिइरहेको छ । अहिले आएर विकासको क्रम हामीले सोचे जस्तो छिटो भएन । त्यो कारणले जनता नजिक पुग्नको लागि समय बढि लाग्यो । विगत १० वर्षको समयमा एकदम धेरै आयुर्वेद विकास भएको छ, र मान्छेहरुको रुचि सँगै लोकप्रियता पनि बढेको छ ।
हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद धादिङबेशीमा एउटा छ,अरु आयुर्वेदको संस्थाहरु धादिङ जिल्लाभर ४ ठाउँमा छ । जसमा रुवीभ्याली गाउँपालिकाको सेर्तुङ पोराङमा,गजुरी गाउँपालिकामा, गल्छि गाउँपालिकाको बैरेनीमा र नीलकण्ठ नगरपालिकाको ज्याम्रुङमा गरी हामीले पाचँ ठाउँबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ । यो सबै संस्थाहरुबाट निशुल्क आयुर्वेद औषधिहरु वितरण गर्ने, प्राबिधिकबाट स्वास्थ्य जाँचहरु गराउने, हामीले नसर्ने रोगहरु अम्लापित्त, बाथ रोग, पिनास, प्रेसर, सुगर जस्ता खानाहरुको कारणले लाग्ने रोगहरुलाई बढि फोकस गरिरहेका छौँ ।
त्यस्को लागि हामीले तातो बाफले सेक्ने, मालिस गर्दिने, नाकमा औषधि लगाएर मालिस गर्दिने, टाउकोमा तेल राखेर मालिस गर्ने जस्ता यस्तो विभिन्न सेवाहरु हामीले पहिला देखि दिइरहेका छौँ । हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद धादिङबेशीमा पछिल्लो वर्ष देखि एकदम व्यवस्थित रुपमा तीन वटा नयाँ सेवाहरु सुरु गरेका छौँ । पाइल्स फिस्टुला,प्रेसर भएका बिरामीहरुको लागि भनेर एउटा सामान्य सानो अप्रेसन हुन्छ जस्मा धागो बाँधेर निको बनाउने गरिन्छ ।
त्यस्तैमा बिशेषज्ञ भएको डाक्टर हाम्रो हुनुहुन्छ । ल्याब सेवा पनि हामीले सुरु गरेका छौँ । अरु अस्पतालहरुको दरमा एकदम सहुलियत छ । जो मान्छेले पनि ल्याबबाट सेवा लिन सक्नु हुन्छ । हामीले फिजियोथेरापी पनि सुरु गरेका छौँ । यो वर्षबाट तीन वटा सेवा सुरु गयौँ । त्यो भन्दा अगाडी बाथ रोगहरुको,दुखाइको, नसाको रोगहरुको लागि भनेर मालिस गर्ने र सेक्ने त पहिले देखिनै चलाइरहेका छौँ । जुन मान्छेहरुमा राम्रो रिजल्ट लेराएको छ ।
त्यही भएर मान्छेहरुको एकदम भिड लाग्ने गर्छ । कोभिड १९ को समयमा जिल्ला आयुर्वेद र अरु शाखाहरु निरन्तर रुपमा चलाइरहेका छाँै । तर सकेसम्म हामीले कन्ट्रयाक एकदम कम गरेर, साबधानी पूर्वक बिरामी जाँच्ने गरेका छौँ । हामीले बन्द नगरिकन सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ ।
अन्य मेडिकल तथा अस्पतालहरुमा लाइन लागेर,नाम दर्ता गरेर परिक्षण गर्न आउँछन् तर आयुर्वेद औषधालयहरुमा यस्तो नहुनुको कारण के होला ?
यो पुरानो पनि हो तर जब बिचमा एलोपेथिक चिकित्सकका विकास भयोे त्यसपछि त्यसले यती धेरै लोकप्रियता भयो कि बिरामीलाई चाँडै निको हुने र त्यतीबेला फेरि सरुवा रोगको जमना थियो त्यसलाइ चाँडैनै बिसेक पार्नुपर्छ भनेपछि एलोपेथिक चिकित्साले छिट्टो बिकास गर्याे र त्यो समयमा त्यसले काम गरेको भएर लोकप्रियता भयो ।
त्यतिबेला देखिनै आयुर्वेद पछि पर्यो किनभने सरकारको नितिहरुले पनि धेरै असर पार्यो,ईमरजेन्सी केशहरुलाइ छिट्टै ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनेर पनि अस्पतालहरुमा बढि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने तिर लागे त्यो भएर नै आर्युवेदिक चाहिँ अली पछि पर्यो । अहिले पनी मान्छेहरुले भन्ने गर्छन् आर्युर्वेदिकमा पुरानै कुराहरु मात्रै धेरै छन् नयाँ कुराहरु रिसर्च भएको छैन,रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्छ ।
कोरोना भाईरस रोकथाम तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागी के कस्ता जडिबुटी तथा घरेलु उपाय अपनाउन सकिन्छ ?
हाम्रो गाउँघरमा पाउने गुर्जो, बेसार पानी, मरीच, अदुवा, तुलसी जस्ता औषधी जडिबुटीहरुले हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउछ भन्ने कुरा हामिले पहिले देखिनै सुन्दै आएका छौँ । आयुर्वेदमा चाँही दुईवटा छ, एउटा खाना र अर्को औषधि, जस्तै बेसारलाइ खानाको रुपमा पनि लिइन्छ र औषधिको रुपमा पनि फरक यति मात्रै हो कि मात्रा पुर्याएर खानुपर्छ ।
हाम्रो गाउँघरमा पाउने गुर्जो, बेसार पानी, मरिच, अदुवा, तुलसी, पिप्ला, अदुवा सुकाएर बनाउने सुठो, अशोगन्धा जस्ता जडिबुटी औषधीले अहिलेको कोभिडको समयमा एकदमै राम्रोसँग मिलाएर खाँदा लाभदायक हुन्छ । हामीले यस्ता जडिबुटि औषधिको रुपमा प्रयोग गर्दा भने मात्रा मिलाएर खानुपर्छ ।
जस्तै अदुवा, मरिचलाइ घाँटि दुख्दा, खोकि लाग्यो भने मात्रै प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भने बेसारलाइ प्रयोग गर्दा राती सुत्ने बेलामा मनतातो पानीमा वा दुधमा एक चिम्टी मिसाएर खाँदा राम्रो हुन्छ । ताजा गुर्जो प्रयोग गर्नुपर्दा २ सेन्टीमिटर जती टुक्रालाई थिचेर राती भिजाएर राखेर भोलीपल्ट बिहान खाँदा पकाएर वा यतिकै खाँदा पनि राम्रो हुन्छ भने चीया जस्तो बनाएर मिश्री मिसाएर खाँदा पनि हुन्छ । गुर्जो भनेको एउटा यस्तो सितल हुने जडिबुटि हो यसले गर्मीलाइ कम गर्छ भने पेट पोल्दा पिसाब पोल्दा पनि काम गर्छ ।
यस्लाई दुई तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नुभयो एउटा हाम्रो खानामा मिसाएर र अर्को औषधीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जुन अनुपातमा यस्को मात्रा मिलाउनु पर्यो ?
हो बेसार धेरै प्रयोग गर्दा शरिरलाई एकदम गर्मी गराउछ । ज्वरो आउने, पिसाब पोल्ने, पिसाब नआउने धेरै मात्रमा प्रयोग गर्दा औषधीहरु प्रयोग गरिरहेको मान्छेहरुलाइ रगत पातलो गराउने समस्या लेराउन सक्छ । अरु कुनै रोग लागेको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने सकेसम्म आफैले प्रयोग नगर्ने । स्वास्थ्यकर्मीलाई सोधेर मात्र प्रयोग गर्ने ।
अनि गुर्जोले प्रेसर घटाउँछ,सुगरको मात्रा कम गर्छ सुगर भएको मान्छेले पनि सुगर घटाउँछ भनेर धेरै प्रयोग गर्दा एकदम लो गर्दिन्छ र समस्या झन थपिन्छ । अदुवाले पनि एकदम गर्मि गराउँछ । पाइल्स, फिस्टुला भएको मान्छेले सकेसम्म अदुवा नखानु भन्छौँ । अदुवाले त्यो समस्यालाइ अझै बढाइदिन्छ मान्छे अनुसार औषधीको रुपमा प्रयोग गर्दा जडिबुटिको मात्रा मिलाउनु पर्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण नागरिकहरु त्रासमा छन्,अहिलेको समयमा बेसार पानी, गुर्जो, अदुवाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
तुलसी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तुलसीको तीन÷चार वटा पात रातिको समयमा मनतातो पानिमा भिजाउने छोपेर राख्ने अनि बिहान तताएर खान सक्नुहुन्छ । अथवा बिहानको समयमा उम्लिएको पानिमा तीन चार वटा पात छोपेर राख्ने अनि खाने । हामीले आफैले घरमा प्रयोग गर्न सक्छौ । यदि तपाइहरुलाई कुनै किसिमको रोग छैन, समस्या छैन भने घरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मात्रालाई मिलाएर खान सक्नुहुन्छ जुन २० दिन देखि एक महिनाको समय प्रयोग गर्नुहोस् ।
त्यो समयमा प्रयोग गर्दा तपाइलाई कुनै असर परेको जस्तो लाग्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । आउन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो जिल्ला आयुर्वेदमा आएर परामर्श गर्नुपर्योे, हाम्रो डाक्टरहरुले राम्रोसगँ सल्लाह दिनुहुन्छ । जिल्ला आयुर्वेदमा आउनु भयो भने तपाइहरुलाई त्यो बाहेक अरु औषधि पनि दिन सक्छौँ ।
मरिच, पिप्ला हुन्छ ,त्यस्को औषधि हामीले ७ दिन देखि १० दिन सम्म प्रयोग गर्न सक्छौ त्यसले हाम्रो छातीमा कफ, खोकिको समस्या छ भने राम्रो गर्छ । पुरानो रोगहरु छ भने पनि त्यो सगँ लड्ने क्षमता पनि बढाउँछ । असोगन्दा भन्ने औषधी हामीले ६५ वर्ष भन्दा माथिको जेष्ठ नागरिहरुलाइ पनि निशुल्क वितरण गर्छौ । अहिले हामीले प्रयोग गर्न सक्ने भनेको बेसार,गुर्जो, तुलसी, खोकिहरुको समस्या छ भने मरिच, अदुवा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा सरुवा रोग भन्दा नसर्ने दिर्घरोगहरुका कारणले गर्दा धेरै मानिस मर्न थालेका छन् । यस्ता दिर्घरोगहरुको सफल उपचारका लागि आयुर्वेद औषधीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन ?
आयुर्वेदको पहिलो उद्धेश्य भनेकै रोग लाग्नै नदिने हो । यदि रोग लागिसकेको अवस्था छ भने उपचार गरेर जरै देखि निर्मूल गर्ने (निको पार्ने) हो । अब हामीले सबैभन्दा पहिला त्यो नसर्ने रोग लाग्न दिनु हुँदैन । त्यस्ता नसर्ने दिर्घरोगहरु हाम्रो आहारव्यहार खानेकुरा, हाम्रो बानीव्यवहार आदीका कारणले लाग्ने गर्दछ । त्यस्ता कुराहरुले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य समेत निर्धारण गर्ने गर्दछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो शरीरमा परिरहेको हुन्छ ।
यदि हामीले खानेकुराहरु मिलाएर खाएनौ भनेदेखि हामीलाई पे्रसरको समस्या, सुगरको समस्या, क्यान्सर पनि देखिन थाल्छ । मुख्य त आराम गरेर बस्ने, व्यायाम नगर्ने मान्छेहरुलाई नै यस्ता समस्या देखा पर्ने हो । त्यस्तै हामीले हाम्रो आहारव्यहार मिलाएरै खायौँ, योगा तथा व्यायाम गर्यौँ भने त्यो रोग नै लाग्न पाउदैन भन्ने जस्ता कुराहरु हामीले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट परामर्श दिइरहेका छौँ ।
यदि रोग लागीसकेको छ भने योगा, व्यायाम गर्ने, खानेकुरा बार्ने, औषधिहरु दिएर पनि रोगलाई हटाउन पनि सल्लाह दिएका छौँ । यदि यसले भएन भने एलोपेथिक औषधि गर्नुस भनेर पनि रिफर गर्ने छौँ । बिरामीलाई जे गर्दा राम्रो हन्छ त्यो नै परामर्श दिन्छौँ । हामीले रोग लाग्न नदिन दिनचार्य लाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर कुन रोगमा कस्तो खाने, बाथ रोग लाग्यो भने के गर्ने जण्डिस मा के बार्ने भनेर पनि भन्छौँ ।
हामीलाई केहि शारिरिक समस्या छ भने जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर परामर्श लिन सकिन्छ होइन त ?
पक्कै पनि भन्नुपर्छ, हामिले जुनसुकै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर रोगको समस्या छ भने त आउनुस नभए पनि स्वास्थ्य अवस्था कसरी राम्रो बनाइराख्ने त जस्तै नसर्ने रोगहरु पनि ३०/३५ वर्ष कटेपछि नसर्ने रोगहरु पनि विस्तारै शरिरमा आउन थाल्छ किनभने हामी पहिले जस्तो बलियो हुदैनौँ, हाम्रो सेलहरुपनि काम गर्दा गर्दा, टेन्सनले व्यवहारिक कुराहरुमा मात्रै ध्यान गइरहेको हुन्छ । स्वास्थ्यमा ध्यान त्यति जादैँन त्यसैले हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाइ स्वस्थ राख्नको लागी भएपनि आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आएर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ ।
नसर्ने रोगको लागी मात्रै नभएर कोभिड १९को लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वस्थ व्यक्तिहरुलाई भनेर कार्यक्रम आएको छ जस्तै स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रम छ,जसमा हामीले व्यक्तिको शरीर स्वस्थ होस भनेर राम्रो खालको चिया बनाएर दिने र उनीहरुको क्षमता हेरेर दिनहुँ योगा सिकाउने गरेका छौँ ।
हामीले विशेष गरी जेष्ठ नागरिकहरुको लागी रसायन औषधि निशुल्क बाँडिराखेका छौँ जसले उहाँहरुलाई स्वास्थ्य रहनुका साथै राम्रो, बलियो बनाईरहन्छ र रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढाउँछ । छ महिना भन्दा कम उमेरका बच्चा भएका आमाहरुलाई दुध नआएको खण्डमा दुध आउने र गर्भवति भएपछि ज्यान बिग्रिएकाहरुको लागी तेल, औषधी पनि निशुल्कनै बाँड्छौँ । त्यसको लागी तपाईहरुले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्र्पक गर्न सक्नुहुन्छ ।